Webmasters Nightmare Kana Kuti Ungagadzirisa Sei Bots - Semalt Expert
Kungofanana nedzimwe njodzi dzekuchengeteka, botsani vave dambudziko guru kune webmasters. Vanhu vakawanda vanoshandisa zvirongwa zvinorwisa malware uye antivirus kuti vabvise zvirwere izvi. Runing a software firewall uye kuziva kuti ndedzipi nzira dzehutano dzichave dzakakodzera kwauri iwe unofanirwa kuchengetedza hurongwa hwako hudzivirirwa. Asi kana zvinhu zvichitora chimiro chakakomba, unofanira kufananidza zvakasiyana-siyana kuti uve nemafungiro ezvakakodzera zvakakosha zvekushandisa kwako. Chinhu chokutanga chaunofanira kuita ndechekuongorora uye kuongorora hurongwa hwako zvakakwana kuti uzive kana une bot kana kwete. Heino nzira yekuwana uye kubvisa mabhoti kusvika kumwero mukuru.
Runza zvinopesana nezvirongwa
Zvingava zvakanaka kana iwe uchitamba zvinorwisa malware. Kuwana zvirongwa zvakadaro paIndaneti zviri nyore. Iwe unofanira kutora shanduro yavo ichangopfuura, uye yakanakisisa purogiramu yekuenda nayo ndeye EyeBlink. Iyi software yakanaka kune mabhizimisi maduku. Julia Vashneva, we Semalt Mutungamiri Mukuru weVatengi veMutambarakede, ane ruzivo rwekuti purogiramu iyi inogona kuwana nyore uye kubvisa malware uye bots kubva mudakombiyuta yako. Zvimwe zvirongwa zvepachena uye software zvinowanika paIndaneti, asi chirongwa ichi hachina kusununguka, uye iwe unofanirwa kubhadhara mari yekuwana zvose zvayo.
Kana iwe usingafariri kushandisa purogiramu iri pamusoro apa, unogona kutora hijack kubva pane zvinoitika..com kana imwe webhusaiti yakafanana. Kuchengeta nekuisa chigadzirwa ichi hazvizotora nguva yakakwana. Iwe unongotanga kunyora uye kuumba nhoroondo panzvimbo. Kamwe kambani yakagadzirira, iwe unogona kuikumbira uye ita kuti iite.
Tsvaga maWorld Firewall's settings
Unofanirwa kutarisa mapiritsi e-firewall's kuti uone kana chikumbiro chave chiri kushanda zvakanaka kana kwete. Zvakakosha kuti iwe uone uye uchinje zvirongwa zvaro nguva dzose. Bvisa mitemo yemoto uye usakanganwa kuchengeta zvirongwa zvisati zvavhara firiji.
Tsvaga Mafa Akabatwa
Enda kuC C yekombiyuta yako uye uongorore mafaira eIndaneti. Various bots rewrite aya majeri mafaira kuti anyengese kombiyuta yako pachayo kuti ibatane kune mvumo yeA IP isina kukodzera kubva kune server. Iwe unofanirwa kuchenjerera paunenge uchibatanidza kune internet uye iva nechokwadi chokuti wakabatana kuburikidza negwaro rakagamuchirwa uye rakagamuchirwa IP chete. Izvi zvichadzivirira kombiyuta yako kuti irege kukuvadzwa nemarware uye bots. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chinonyunyuta, unofanirwa kugadzira makopi ekuchengetedza maFaira, uye chesa zvinhu zvisinganyanyi uye uchengete zvirongwa zvako nekukurumidza.
Shandisa Windows Task Manager
Unofanirwa kushandisa Windows Task Manager kana SysInternal's Process Explorer kuchengetedza kombiyuta yako kubva kune malware uye bots. Nokuda kweizvi, unofanira kutanga utarisa mafaira nezvisungo uye kubvisa bots. Kunyanya, iwe unofanirwa kuvhara maIndaneti ayo anotarisa mutsva uye asingatenderwi. Kana zvinhu zvakashusha zvichiramba zvichiuya, iwe unofanira kuita mazita avo uye kuti uzvibvise kubva pane yako kambani nekukurumidza.
Pakupedzisira, iwe unogona kutsvaga webhu kuti uratidze nzira yakakodzera yekubvisa bots. Kubvisa kwacho kwakaoma kune avo vasingazivi nezvehutachiona hwehutachiona uye hunorwisa-malware Source .